Home Customer Service Service Request
ENGLISH: This is Customer Service Center for Myanmar's Net valued clients. Feel free to use this from to send instructions on what to do with your web site or the services you bought from us. If you'd like to talk withour customer service, please call ☎ 09 449 300 900. Thank you!
MYANMAR: လူကြီးမင်းရဲ့ ဝဗ်ဆိုက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ ပြင်ဆင်စရာ၊ ဖြည့်စွက်စရာများ ညွှန်ကြားချက်များကို အောက်ပါ ကွက်လပ်များ ဖြည့်စွက်ပြီး ပေးပို့ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးဖွင့်ရက်ဖြစ်ရင် ၂၄ နာရီ အတွင်း ပြန်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် စကားပြောချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် ☎ 09 449 300 900 ကို ဆက်ပေးပါရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။